News - Njirimara na ụkpụrụ nke azu yiri nkpuchi igwe
Njirimara na ụkpụrụ nke igwe yiri igwe nkpuchi
Ihe nkpuchi azu kwesiri izute EU en149: 2001 P3. A na-ejikarị ya eme ihe iji gbochie ájá ụlọ ọrụ na-acha ezigbo ọkụ na anwụrụ ọkụ n'oge ọrụ ịgbado ọkụ. Ihe kariri 99% n’ime ha nwere oru nzacha, nke kariri mmiri na mmiri oku ma obu mkpuchi nchebe ogologo oge; o kwesịrị ekwesị maka uzuzu nchebe na-ewu, nkume Ngwuputa, akwa, egweri, metal mgbatị, ọgwụ, electronic, ọgwụ, ihe onwunwe nhazi na egweri na ndị ọzọ ọrụ. O nwekwara ezigbo ihe na-egbochi uzuzu na oke aja.
Bangyin n'ibu ụdị azu nkpuchi igwe bụ akpaka igwe maka mpịachi nkpuchi ahụ mmepụta. Ọ na-eji ultrasonic technology ka nkekọ 3-5 n'ígwé nke eyi na-abụghị kpara akwa, arụ ọrụ carbon na nyo ihe, na-ebipụ ndị mpịachi nkpuchi ahu. Dika ihe di iche iche eji eme ihe, ihe nkpuchi meputara nwekwara ike ichota onodu di iche iche dika ffp1, FFP2, N95, wdg. Eriri eriri bu ihe na-agbanwe agbanwe, nke na-eme ka nti onye nwe ya ghara iru ala. Ihe nhicha akwa nhicha nke nkpuchi nwere mmetụta nzacha dị mma, nke dabara na ọdịdị ihu Asia, ma nwee ike itinye ya n'ọrụ, nsị na ụlọ ọrụ mmetọ ndị ọzọ.
Ọrụ na njirimara nke igwe nkpuchi azu
1. Ọ nwere ike hazie ịkpakọba nkpuchi ahu dị ka azụ ụdị mpịachi ájá nkpuchi igwe, nke nwere ike esichara n'otu oge.
2. PLC njikwa akpaka, akpaka na-agụta.
3. Ngwaọrụ nfe dị mfe, dị nfe ịgbanye mmanụ.
4. Ihe nkedo na-anabata mmịpụta na ọnọdụ ngbanwe, nke nwere ike dochie ngwa ngwa ma mepụta ụdị nkpuchi dị iche iche.
5. A na-eji alloy aluminum eme ihe na igwe dum, nke mara mma ma sie ike na-enweghị nchara.
6. Advanced oriri na-anata ngwaọrụ.
7. Nkwụsi ike dị elu na ọnụego ọdịda dị ala.
ir nkpuchi ihe nhicha, ma ọ bụ sọchie ihe nkpuchi. Workingkpụrụ ya na-arụ ọrụ bụ ime ka ikuku nwere ihe ndị na-emerụ emerụ ma kpochaa ya site na ihe nzacha nke nkpuchi ahụ, wee kuru ya.
Supplydị iku ume ikuku na-ezo aka na ikuku ikuku dị ọcha dịpụrụ adịpụ site na ihe ndị na-emerụ ahụ, nke ezigara ihu mmadụ ka ọ na-eku ume site na catheter site na ike dị ka ikuku ikuku, igwe gas cylinder, wdg.
Ihe nkpuchi ụdị edozi bụ ihe a na-ejikarị arụ ọrụ kwa ụbọchị. A kọwara ụzọ nhọrọ na iji ọnọdụ nke ihe nkpuchi dị otú ahụ n'ụzọ zuru ezu n'okpuru. Ọdịdị nke ihe nkpuchi nyo ga-ekewa n'ime akụkụ abụọ. Otu bụ isi ahụ nke nkpuchi ahụ, nke nwere ike ịghọta naanị dị ka okpokolo nke nkpuchi; nke ọzọ bụ iyo ihe onwunwe akụkụ, tinyere iyo owu maka uzuzu mgbochi na chemical nyo igbe maka mgbochi nje. Ya mere, maka nhọrọ na ojiji nke ihe nkpuchi nkpuchi, ụfọdụ ngwaahịa nke Guangjia na-enye gị ihe dị mma, nke ahụ bụ, ịnwere ike iji otu ahụ mkpuchi ahụ, yana mgbe ịchọrọ ntanye na uzuzu na-arụ ọrụ gburugburu ebe obibi, ịnwere ike itinye ihe owu na-edozi ahụ kwekọrịtara, ka ị nwee ike iyi ihe mkpuchi uzuzu; mgbe ị chọrọ iji mepụta mgbochi gas na gburugburu ebe obibi na-egbu egbu, dochie akwa nhicha ahụ, yana ngwaọrụ ya na igbe igbe kemịkal kwekọrọ na ya, yabụ ọ na-aghọ ihe nkpuchi gas, ma ọ bụ dịka mkpa ọrụ gị si dị, iji nye gị ọtụtụ njikọta
Nkowa okwu mmeghe nke ihe nhicha maka nkpuchi
Ihe nzacha nke nkpuchi nkpuchi na-ekewa ya na uzo abuo, ya bu uzuzu na ihe na-egbu egbu. Ọrụ ha bụ ịkwado ikuku na-emerụ ahụ, gụnyere uzuzu, anwụrụ ọkụ, ikuku mmiri, gas na-egbu egbu na vapors na-egbu egbu, site na ihe nzacha, iji gbochie ha ịmịcha.
Iji ihe nkpuchi
Ojiji nke nkpuchi n'ozuzu, ihe nkpuchi ga-abụ nha kwesịrị ekwesị, iyi ụzọ ga-abụrịrị nke ziri ezi, ihe nkpuchi ga-adị irè. A na-ekekarị ihe nkpuchi na-ere n'ahịa na akụkụ anọ na iko. Ihe nkpuchi akụkụ anọ ga-enwe ma ọ dịkarịa ala okpukpu atọ nke usoro akwụkwọ iji nwee mmetụta nchebe. Onye ọrụ kwesịrị ịpị waya na nkpuchi na akwa nke imi, wee gbasaa nkpuchi ahụ dum n'akụkụ akwa nke imi, ka o wee rụọ ọrụ dị irè. Childrenmụaka nwere ike iyi masks nwere akụkụ anọ, n'ihi na ọ nweghị ụdị edozi, ọ bụrụ na ejikọtara ya nke ọma, nwere ike ịbịaru ihu nwata ahụ. Ekwesiri ime ka nkpuchi nkpuchi ahu mee ka ihe di nkpa ma oburu na edere ya na ihu, ka iku ume nke ikuku ghara ipupu ka odi ire. Mgbe ị na-eyi ihe nkpuchi yiri iko, jiri aka abụọ kpuchie ihe mkpuchi wee gbalịa ịfụ. Lelee ma ikuku mmiri dị na nsọtụ nke ihe nkpuchi ahụ. Ọ bụrụ na nkpuchi ahụ esighi ike, ị kwesịrị ị mezigharị ọnọdụ ahụ tupu i yikwasị ya.
Mgbe m kwesịrị ịgbanwe nkpuchi
1. Ihe nkpuchi ahụ rụrụ arụ, dị ka ọbara ọbara ma ọ bụ ụmụ irighiri mmiri
2. Onye ọrụ ahụ chere na nkwụsị nke iku ume na-abawanye. Cottonjá àmà nyo owu: mgbe nkpuchi dabara nke ọma na onye ọrụ ihu, mgbe onye ọrụ na-eche oké ume iku ume, ọ pụtara na nyo owu bụ jupụtara nke ájá ahụ na a ga-anọchi.
3. Ihe nkpuchi mebiri
4. N'okpuru ọnọdụ na nkpuchi na ọnụ ụzọ nke onye ọrụ na-emechi nke ọma, mgbe onye ọrụ na-esi isi ísì nsị, mkpuchi ọhụrụ ahụ ekwesịghị iyi nwa oge. Site na nhazi ihe omumu mmadu, ngbasa obara nke mucosa imi di ike.
Post oge: Nov-02-2020
ịwa ahụ nkpuchi Ndinam igwe, ịwa ahụ ihu nkpuchi Ndinam igwe, abụghị kpara ihu nkpuchi Ndinam igwe, sooks clamping igwe, abụghị kpara nkpuchi Ndinam igwe, igwe nkpuchi ihu nkpuchi,